သင့်ရဲ့ organizationအတွင်း တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုတိုးမြင့်အောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ကြမလဲ? | Mycanvas
သင့်ရဲ့ organizationအတွင်း တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုတိုးမြင့်အောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ကြမလဲ?
တကယ်လို သင်ရဲ့အလုပ်ခွင်မှာ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု မရှိလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား? ဒါဟာ သင်တစ်ယောက်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Accountability (တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု) သည် အကြောင်းပြချက် မပြုလုပ်ဘဲ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ကိစ္စအဝဝကို အပြည့်အဝတာဝန်ယူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ယူမှုနည်းခြင်းဟာ ယုံကြည်မှုနည်းခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်နိမ့်ကျခြင်းနှင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော လုပ်ငန်းခွင်ကို ဦးတည်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိ organizationအတွင်း positive accountability ရရှိရန် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက် ၃ချက်ကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
၁။ စံနမူနာအနေဖြင့် ကျင့်ကြံပါ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ တာဝန်ခံမှုအတွက် စံနမူနာပြဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုလိုခြင်းမှာ သင်ကိုယ်တိုင်တွင် တာဝန်ယူမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တာဝန်ခံမှုရှိသူများကို ပံ့ပိုးမှုပေးပြီး ဆုများပေးကမ်းခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း positive accountability တိုးပွားအောင် ပြုလုပ်ပါ။
၂။ မျှော်မှန်းထားသည်များကို မြင်သာအောင်ပြောဆိုပါ။
မန်နေဂျာအများစုက မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များကို အဖွဲ့ဝင်များက သိရှိသည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြပြီး အမှားတစ်ခုခုရှိမှသာ မျှော်လင့်ထားသည်များကို အသေးစိတ်ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိနှင့် အဖွဲ့ဝင်များကြားတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် စကားဝိုင်းများကို ဖော်ဆောင်ရန်မှာလည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။
၃။ အချက်အလက်များပေါ်မူတည်ပီး ဆုံးဖြတ်ချက်များပြုလုပ်ပါ။
တာဝန်ခံမှုသည် ထင်မြင်ယူဆချက်များကြောင့် ရှုပ်ထွေးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများဟာ သူတို့၏ထင်မြင်ယူဆမမှုများပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ရလဒ်များမကောင်းသောအခါ သင့်အဖွဲ့၏ယုံကြည်မှု ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နိမ့်ကျခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများပြီး အရှိန်အဟုန်နှင့်ပြောင်းလဲလာသော ခေတ်ကြီးမှာ positive accountability ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိခြင်းသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ အရည်အချင်းများတိုးတက်လာရုံတင်မက လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုနှင့် အောင်မြင်မှုတွေပါ ရရှိနိုင်ပါတယ်။